I-Ning: Buyisa futhi Fometha Imibuzo ye-API | Martech Zone
I-Ning: Buyisa futhi uhlele API Imibuzo
NgeSonto, Agasti 24, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kule mpelasonto bengisebenza kuphrojekthi lapho besifuna ukudonsa okuqukethwe kuyo yonke indawo Encane i-Indiana (yakhiwe nge Ning) ekhasini eliphakathi. I- I-Indianapolis Fringe Festival kugcwele futhi iSmall Indiana ibifuna ukusiza ukukhuthaza umcimbi.
I-API kaNing akuyona ihleleke kakhulu, futhi imibhalo nezinhlelo zokusebenza zesampula ziyashoda ngempela. Ngenxa yezinkinga zesikhathi ukwenza ikhasi lisebenze, bekufanele ngithathe izindlela ezimfishane kunokuba ngakhe isixazululo esifanele. Ikhasi lamanje liyasebenza, kepha linamakhodi aqinile ngaphandle kokuguquguquka okuningi. Kungenzeka kube nokuqinisekiswa okwengeziwe kokuqukethwe futhi (isibonelo: ukuqinisekisa ukuthi ama-blog ama-blog ahlelwe ngendlela ehlukile kuma-url weforamu, njll.).
Indlela kaNing API okusebenzayo ukuthi iyinjini yokubuza lapho ungathola khona imiphumela oyidingayo kokuphakelayo kwe-RSS. Sicele ukuthi noma ngubani obloga, aqale ingxoxo, noma alayishe izithombe amake ngokukhethekile okuqukethwe kwabo indyfringe-2008. Lokhu kungivumela ukuthi ngakhe ikheli lokuphakelayo langokwezifiso elithola konke okuqukethwe (ngokuhlehla ngedethi eshicilelwe nge-URL elandelayo:
Ngaphakathi kwekhasi, ngibe sengikhipha futhi ngihlela imininingwane esekhasini ngisebenzisa Isigaba seMagpie RSS ye-PHP. Chofoza ukusondeza ikhodi noma ungakwazi ibuke noma uyilande.
API bese uyiFometha ”width =” 300 ″ height = ”159 ″ class =” aligncenter size-medium wp-image-2694 ″ />
Kukhona ukusebenza okuthakazelisayo lapha. Sibonga u UTyler Ingram (ekhaya lami laseVancouver lesikole samabanga aphakeme!) abasize ngokufometha izinsuku kahle nge-Twitter.
Nakulokhu futhi, akuyona ikhodi ehlanzeke kunazo zonke futhi futhi ayihlukaniswanga kahle kwimisebenzi yokusetshenziswa okusheshayo - kepha kuyasebenza. 🙂 Ngibuyisela izixhumanisi ukuze ama-URL aqondiswe kahle, ngisuse noma yimaphi amathegi we-HTML kokuqukethwe okufakiwe, ngifometha usuku, futhi ngilinganise inani lamagama akhonjisiwe ukuze umphumela wekhasi ubukeke kanjena:
Abanye uBabble eBabbling Banshee Njengokubuyekeza kwami ​​iGood Grief, uSidney bekukhona izingcezwana ongazithanda futhi ungazishayi… 8/24 11:55 AM
Lokhu API kuyinzuzo enkulu ngoba empeleni ungabhalisela okuqukethwe kanye nezihloko kumanethiwekhi akwaNing amakwe ngqo, noma ungahlanganisa iwebhusayithi yangaphandle nokuqukethwe kwe-Ning. Ngiyethemba nje ukuthi u-Ning usebenza ekusetshenzisweni kwesampula nasemibhalweni ngakho abantu abanjengami bangakwenza lokhu ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi!
Iya kuluhlaza: Izindlela ezi-5 zokuyeka ukusebenzisa ama-CD nama-DVD